Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada'' Jaamacadaha UNISO iyo MUST oo heshiis dhanka waxbarashada ah kala saxiixday
August 18 2017 15:37:55
Daawo Sawirada'' Jaamacadaha UNISO iyo MUST oo heshiis dhanka waxbarashada ah kala saxiixday
Kadib socdaal ay ku yimideen Muqdisho wafdi ka socda jaamacadda Mbarara ee Culuumta iyo Tiknoolajiyadda (MUST) oo ku taalla dalka Uganda, ayaa waxaa maanta heshiis dhanka waxbarashada ah ay kukala xaxiixdeen Muqdisho labada jaamacadood ee Soomaaliya (UNISO) iyo Mbarara.
Heshiiska oo ay goob joog ka ahaayeen gudiga sare ee jaamacadda Soomaaliya, maamulka jaamacadda, u qeybsanaha jaamacadda ee qaaradda Afrika, iyo masuuliyiin kale, ayaa waxaa si wada jir ah u saxiixay gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, Dr. Ismaaciil Cali Siyaad iyo dhiggiisa Mbarara, Prof. Celestino Obua.
Saxaafadda ayey si wada jir ah ula hadleen labada gudoomiye, waxaana hadalka ku horumaray Dr. Ismaaciil Cali Siyaad kaas oo tafaasiil ka bixiyay waxa uu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen labada jaamacadood.
Gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, Dr. Ismaaciil Cali Siyaad ayaa waxa uu yiri, “Aad ayey noo farxad gelineysaa in aan heshiis la saxiixanno jaamacadda Mbarara. Heshiiskaan waxa uu qeyb ka qaadanayaa howlaha aan ku tayeyneyo waxbarashada”.
Waxa uu intaa raaciyay, “Maalmo ka hor waxa aan heshiis sidaan oo kale la saxiixannay Jaamacadda Islaamka ee dalka Uganda (IUIU), dhawaanna waxa aan la saxiixan doonaa heshiis jaamacado kale oo ku yaalla qaaradda Aasiya oo ay kamid tahay jaamacadda Assumption ee dalka Thailand”.
Gudoomiyaha jaamacadda Mbarara, Prof. Celestino Obua, ayaa waxa uu markiisa la hadlay warbaahinta waxa uuna cabbiray dareenkiisa ku aadan saxiixa heshiiska waxa uuna aad ugu mahadceliyay maamulka iyo aasaasayaasha jaamacadda Soomaaliya oo suura geliyay in uu Muqdisho yimaado kadibna uu heshiis dhaxal gal ah la saxiixdo dhiggiisa jaamacadda Soomaaliya.
Waxa uu yiri, “Heshiiskaan waxa uu anfacayaa dalalka Soomaalida iyo Uganda, waxa uu sare u qaadayaa isweydaarsiga aqoonta”
Madaxda jaamacadda Soomaaliya ayaa waxa ay hadiyada gudoonsiiyeen kana gudoomeen hadiyada kale wafdiga ka socday jaamacadda MUST, waxaana markaas kadib madaxda labada jaamacadood ay socdaal ku tageen xarunta jaamacadda Soomaaliya ee Ismaan Geedi Raage oo ah xarunta kulyadda Caafimaadka ee jaamacadda, Isbitaalka Jaamacadda iyo xarunta maamulka.
Intii ay joogeen xarunta Ismaan Geedi Raage waxa ay tageen maktabadda oo ay kumanaan bug taallo, ardayda qaar kamid ahna ay buugaag ku aqrisanayeen, waxa ay booqdeen fasallo, waxa ayna ugu danbeyn la kulmeen madaxda kulyadda caafimaadka iyo maamulka Xarunta.
Mudda isbuc gudihiis ah, waa heshiiskii labaad ee jaamacadda Soomaaliya ay la gasho jaamacad kale, waxaana arintaan aad u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed oo sii laba jibaaray kalsoonidii ay ku qabeen jaamacadda, waxaana aad isaga soo daba dhacaya fariima hanbalya ah oo baraha bulshadu ku kulanto loogu dirayo maamulka Jaamacadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Dr. Ismaaciil Cali Siyaad.